သင်ယူနိုင်စွမ်းကင်းမဲ့ခြင်း - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
မေ 21, 2018 Varisa Kanchanachayphoom, M.D.
သင်ယူနိုင်စွမ်းကင်းမဲ့ခြင်းဟုခေါ်တဲ့ “ Learning Disorders” ကို အများအားဖြင့် “ LD” လို့ အတို ကောက် ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ အခြေခံသင်ယူနိုင်မှုစွမ်းရည်များဖြစ်တဲ့ စာဖတ်ခြင်း၊ စာရေးခြင်း (သို့) တွက်ချက်ခြင်းတွေမှာ သင်ယူနိုင်စွမ်းနည်းပါးခြင်းကို ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ယူနိုင်စွမ်းကင်းမဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ ထိုအပြုအမူတွေကို တစ်ခုမှ မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း (သို့) သူတို့ရဲ့ အသက်အရွယ်ထက် ၂ နှစ်ငယ်တဲ့ အပြုအမူတွေကိုပဲ ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ ယေဘုယျပြောရရင် သင်ယူနိုင်စွမ်းကင်းမဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေက သာမာန် ဉာဏ်ရည် (သို့) သာမာန် ထက်မြင့်တဲ့ ဉာဏ်ရည်မျိုးရှိပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ၆ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ သင်ယူနိုင်စွမ်းကင်းမဲ့ခြင်းအပြုအမူတွေကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
LD တွေကို အမျိုးအစား ၃ မျိုး ခွဲခြားပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
စာလုံးပေါင်း နှင့် ရေးသားနိုင်စွမ်းကင်းမဲ့ခြင်း
LD ခံစားနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာရပ်များ
ကလေးငယ်တွေက စာဖတ်တဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲရှိခြင်း၊ မှားယွင်းစွာဖတ်မိခြင်းတို့ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ စာဖတ်ခြင်း အလွန်နှေးကွေးပြီး ခက်ခဲစွာဖတ်နေရခြင်း၊ ဖတ်လိုက်မိတဲ့စာအပေါ် မှန်ကန်စွာအသံထွက်နိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းခြင်း၊ မှားယွင်းစွာဖတ်မိခြင်း၊ စာဖတ်ဖို့ တွန့်ဆုတ်နေခြင်း၊ ပီသစွာမဖတ်တတ်ခြင်း (သို့) ရိုးရှင်းစွာခန့်မှန်းခြင်းတွေကို ပြုလုပ် ဖို့ခဲ့ယဉ်း တတ်ပါတယ်။ စာဖတ်နိုင်စွမ်းကင်းမဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တွေက စာဖတ်တဲ့အချိန်မှာ နားလည်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ဘာတွေဖတ်မိနေလဲဆိုတာကိုတောင် နားမလည်တတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ စာလုံးပေါင်း နဲ့ စကားလုံးတွေကို အသံထွက်တဲ့နေရာမှာ အခက်တွေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့စကားလုံး၊ မဖတ်တတ်တဲ့ စကားလုံးဆိုရင် ကျော်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ စာကြောင်းတွေမှာ စကားလုံးအပိုတွေထပ်ထည့်ပြီးတော့ ဗျည်းတွေကို အစားထိုးခြင်း၊ သရစကားလုံးတွေကို အစားထိုးခြင်းနဲ့ သရသံတွေကို မှတ်မိဖို့ ခက်ခဲခြင်း၊ စကားလုံးရဲ့ စာလုံးအထားအသိုကို ရောထွေးခြင်း၊ ကြိယာတွေကို မှားယွင်းစွာသုံးမိခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။
စာရေးတဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲရှိနေတဲ့ကလေးငယ်တွေကတော့ စာလုံးပေါင်းစွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ စာကြောင်းများကောင်းမွန်စွာရေးနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၊ မှားယွင်းတဲ့ သဒ္ဒါရေးနည်းများ အသုံးပြုမိခြင်း၊ ရေးသားထားတဲ့စာများ အစဉ်တကျမဖတ်နိုင်ခြင်းတို့အပြင် စာရေးခြင်းကနေ တစ်ဆင့် စိတ်ကူးများကို ဖော်ပြဖို့ အချိန်ယူရခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တွက်ချက်နိုင်စွမ်းကင်းမဲ့တဲ့ ကလးငယ်တွေဟာ နံပါတ်တွေရဲ့ တန်ဖိုးကို နားလည်မှုမရှိတဲ့အပြင် ရေတွက်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် နံပါတ်တွေကို မသိရှိနိုင်သလို အဖြေကိုလည်း တွက်ချက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်္ချာနည်းများကို အသုံးပြုပြီး ပေါင်းခြင်း၊ နုတ်ခြင်း၊ မြောက်ခြင်း (သို့) စားခြင်းများ ကို တွက်ချက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ ကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့ ပုစ္ဆာကို နားလည်မှာမဟုတ်သလို ပုစ္ဆာကို ဖြေရှင်းတွက်ချက်နိုင်စွမ်းလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခုလိုမျိုး လက္ခဏာတွေက အခြားသော ကလေးငယ်တွေနဲ့ တူညီတဲ့အသက်အရွယ်မှာတင် သိသာတဲ့ကွာခြားမှုတွေကို ပြသနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေက ကလေးငယ်တွေရဲ့ ရေရှည်သင်ယူနိုင်စွမ်းနဲ့ အခြေခံအချက်တွေကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
LD ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ အမူအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာခက်အခဲများ
LD ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ အမူအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများထဲက ဥပမာအချို့ကတော့ သင်ယူမှုအပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အလုပ်ကို နှေးကွေးစွာလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် အလုပ်မပြီးမြောက်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ယူမှုအပေါ်မှာလည်း အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ စာရေးခြင်းနှင့် စာဖတ်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ရှားနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ တကယ်ပြုလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်လျော့နည်းနေတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ “ မသိဘူး” (သို့) “ မလုပ်တတ်ဘူး” ဆိုတဲ့ အဖြေကိုပဲ ဖြေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ဟာ အိမ်စာတွေအပေါ်မှာ စိတ်ဖိစီးမှု အလွန်များနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ ယခုလိုဖြစ်ခြင်းကို လူကြီးတွေက အပျင်းကြီးတယ်လို့ ထင်နေတတ်ကြပါတယ်။ လေ့လာသင်ယူစိတ် လျော့နည်းလာခြင်း နှင့် ခေါင်းမာပြီး ကလန်ကဆန် ပြုမူတတ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ LD ကိုခံစားနေရတဲ့ ကလေးငယ်တွေက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေလည်း ပိုပြီးခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – သူတို့ဟာ စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်ပြီး ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ ပျင်းရိခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ယုံကြည်ချက်မရှိခြင်း၊ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ယှဉ်လာတဲ့အခါ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး သိမ်ငယ်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချို့ကိစ္စတွေမှာ သူတို့ဟာ ကျောင်းသွားဖို့ ငြင်းဆန်တဲ့အထိ ပြုလုပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
LD ခံစားနေရတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ ဘယ်လို စစ်ဆေးကုသပြီး ကူညီမလဲ?
ဆရာဝန်အနေနဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ယေဘုယျကျန်းမာရေးမှတ်တမ်း၊ သင်ယူမှု၊ ကျောင်းရဲ့ သမိုင်းတွေအပြင် ထိုကလေးငယ်ရဲ့ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာမှု သမိုင်းတစ်လျှောက်နဲ့ ငယ်စဉ်အခါက ကလေးငယ် ရဲ့ ဆရာတွေဆီက ပြန်လည်ပြောကြားမှုတွေကို ရယူပြီး အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဆရာဝန်က စိတ်ကျန်းမာရေး နဲ့ ဖွံဖြိုးမှုကို စတင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကလေးငယ်ရဲ့ အခြားယေဘုယျယှဉ်တွဲဖြစ်စဉ်များဖြစ်တဲ့ ဝေဒနာတွေ၊ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) လို့ခေါ်တဲ့ အာရုံစိုက်မှုအားနည်းခြင်းရောဂါခံစားရခြင်း၊ စကားပြောဆိုဆက်ဆံမှု ပြဿနာဖြစ်နေခြင်း စတဲ့ ဝေဒနာများ ခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ပညာဆရာဝန်ကနေ ကလေးငယ်ရဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ ရလဒ် တွေနဲ့ ဉာဏ်ရည် IQ Level ၂ ခုကြားက ကွာဟနေမှုတွေကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ စစ်ဆေးမှုတွေ ဆက်လက်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဆရာဝန်က LD အကြောင်းကို နားလည်အောင် အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး LD ရောဂါလက္ခဏာကို တွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် မိသားစုအပေါ်ကို စိတ်သက်သာရာရအောင် ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအတူယှဉ်တွဲဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေကိုလည်း သက်သာအောင် ကုသဖို့ ကူညီဖေးမပေးသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ကလေးငယ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားချို့ယွင်းနေတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေအပေါ်ကိုလည်း အကြုံပြုပေးမှာဖြစ်ပြီး သီးသန့်ပညာ ရေး ဗဟုသုတတွေကိုဝေမျှပေးမယ့် ဆရာတွေနဲ့ အသေးစိတ်ဂရုစိုက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
LD ဖြစ်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေကို သိရှိပြီးတော့ ကူညီပေးခြင်းက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ မိဘတွေဆီကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီးတွေအပေါ် နားလည်မှုအလုံအလောက်ပေးဖို့လည်း လိုအပ်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ မိဘ၊ ဆရာဝန်နဲ့ ကျောင်းဆရာတို့ ၃ ဦးစလုံးဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အတူယှဉ်တွဲပြီး LD ခံစားနေရတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ဂရုစိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကလေးငယ်တွေဟာ LD ရှိနေတဲ့သူတွေအတွက် အထူးသီးသန့်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ သင်ကြားရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုရပါမယ်။ သင်ယူနိုင်စွမ်းကင်းမဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေက ကောင်းမွန်တဲ့အကူအညီနဲ့ သတိထားမှုကို ရရှိနေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ကို ကျောင်းမှာပိုပြီး ပျော်ရွှင်လာအောင် ကူညီပေးနေသလိုပဲ ကျောင်းသွားချင်စိတ်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ အဆိုပါ ကလေးငယ်တွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမြင့်မားလာနိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုချစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ယူနိုင်စွမ်းကင်းမဲ့ခြင်း ပျော်ရွှင်လာအောင် ကူညီပေးနေသလိုပဲ ကျောင်းသွားချင်စိတ်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ အဆိုပါ ကလေးငယ်တွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမြင့်မားလာနိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုချစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Varisa Kanchanachayphoom, M.D.
M.D.,Faculty of Medicine Prince of Songkla University, 2003. , 2005